खतनाको ‘खतरा’ | नेपाली जनता :: Nepali Janta:
प्रकाशित मिति २९ जेष्ठ २०७६, बुधबार १०:०० लेखक नेपाली जनता
मुस्लिम समुदायमा खतना (लिंगको टुप्पाको छाला काटने प्रक्रिया) ले अहिले विकराल रुप लिदैं गएको छ । जसको एक उदाहरण महोत्तरीको लोहारपट्टी नगरपालिका–५ का २ महिने बालक फिरोज शेष बनेका छन् ।
शेषको खतनापछि मृत्यु भयो । खतनाकै कारण शेषको मृत्यु भएपछि खतनाको विषयमा चर्चा चुलिन थालिएको छ ।
शेषलाई खतना गरिएपछि अत्यधिक रक्तश्राव भएकै कारण अस्पतालसम्म पुर्याउनु पर्यो । तर रगत अत्यधिक बगिसकेकाले चिकित्सकहरुले उनको ज्यान जोगाउन सकेनन् । गत २५ चैतमा शेषको मृत्यु भएपछि खतना अर्थात मुसलमानीको विषयलाई लिएर मुस्लिम समुदायमा एकाएक चर्चा बढेको छ ।
‘गाउँमा नै बालकको लिङ्गको छाला काटिएपछि अत्यधिक रक्तश्राव हुँदा संक्रमण समेत भएकाले बालकको मृत्यु भएको हाे’ जनकपुर अञ्चल अस्पतालका बाल रोग विशेषज्ञ डा. जामुन सिंहले बताए ।
खतना के हो ?
मुस्लिम समुदायमा बालकको लिङ्गको टुप्पोतिरको बाहिरी छालालाई काट्ने गरिन्छ । यसलाई ‘मुसलमानी’ समेत भन्ने गरिन्छ । कतिपयले त्यसलाई ‘खतना’ भन्छन् ।
मुस्लिम देशमा प्रायःजसो बालकको मुसलमानी अस्पतालमा चिकित्सकद्वारा नै गरिन्छ । खतनालाई अंग्रेजीमा सर्कमसिजन भन्ने गरिन्छ जुन लैटिनको सर्कम र केडेयर शब्द मिलेर बनेको छ ।
लैटिन भाषाको शब्द सर्कम अर्थात वरिपरी हुन्छ भने केडेयरको अर्थ काट्नु । अर्थात लिंगको अग्रभागलाई काट्ने प्रकृया नै खतना हो ।
खतनाका कारण कतिपयले ज्यान समेत गुमाउँदै आएका छन् । जसको प्रतिनिधिमूलक उदाहरण लोहारपट्टीको यो घटना हो । अन्य देशहरुमा चिकित्सकसँग सल्लाह गरेर खतना गरिएपनि जनकपुरधाम क्षेत्रमा अहिले पनि मौलवीहरुद्वारा नै यो प्रकृया पूरा गर्ने गरिन्छ । जनकपुरधाम क्षेत्रमा चक्कु वा छुराले मौल्बी आदिले मुसलमानी गर्दा कतिपय बालकको अत्यधिक रक्तश्राव हुने, संक्रमण हुने गरेको चिकित्सकहरु बताउँछन् ।
डा. सिंहका अनुसार खतनाका कारण हुने संक्रमणका कारण धेरै बच्चाहरु स्वास्थोपचारका लागि अस्पताल भर्ना हुने गरेका छन् । शुरूमा अस्पताल नआउने र संक्रमित भएको अवस्थामा आउँदा ज्यान जाने जोखिम समेत हुने जनकपुर अञ्चल अस्पतालका पूर्व मेडिकल सुपरिटेन्डेन्ट डा. बलराम मिश्राले बताए ।
मुस्लिम धर्मका मौलाना इजरायल अहमद रिजवीले पनि फलानो मानिसले नै खतना गर्नुपर्छ वा फलानो स्थानमा नै गर्नुपर्छ भनेर कुनै ठाउँमा उल्लेख नरहेको बताए ।
मान्छेलाई जहाँ सुविधा हुन्छ, जुन व्यक्तिद्वारा सुविधा हुन्छ, त्यसअनुसार गर्न सकिन्छ,’ मौलाना रिजबीले थपे, तर मुसलमानी अर्थात् खतना भने गर्नैपर्छ । यो अनिवार्य नै हो । तर कति उमेरमा गर्नुपर्छ भन्ने कुरा पनि किटान गरिएको छैन । मान्छेलाई सहज जुन बेला हुन्छ, त्यही बेला गर्ने गरेको उनले बताए ।
मुसलमानी गर्नका लागि मुस्लिम समुदायको हजामले (कपाल काट्ने व्यक्ति) टुप्पोतिरको बाहिरी छाला लिङ्ग काट्ने गर्छन् । प्रायःजसो गाउँको मुस्लिम समुदायको आफ्नै हजाम हुन्छन् ।
हजामले विधिविधान अनुसार खतना गर्ने गर्छन् । शुरुमा हजामले फातिया पढ्छन् । पूजा गर्दा मन्त्र पढ्नेजस्तै मुस्लिम समुदायमा मन्त्र उच्चारण गरेर फातिया पढ्ने गरिन्छ ।
बालकलाई सामान्य पूजा गरेर घैला वा मचिया वा ठूलो पिँढीमा बालकलाई बसाउँछन् । ‘त्यसपछि बाँसको करचीले बनेको औजारले लिङ्गको बाहिरी गोलो छाला काटेर उल्ट्याइदिने गर्छन,’ राष्ट्रिय मुस्लिम संघर्ष गठबन्धनका प्रवक्ता साजिद हुसैनले भने, ‘अनि रक्तश्राव रोक्नका लागि लिङ्गमा खरानी दलिदिने गर्छन् ।’
एक हप्ता जति घाउ रहने र त्यसपछि निको हुने गरेको उनले बताए । हजामले त्यसपछि आफ्नो पारिश्रमिक स्वरूप पैसा र चामल लगायत खाद्यान्न पाउने गर्छन् ।
घरमा खतना गर्ने प्रक्रिया गलत रहेको उनी तर्क गर्छन् । ‘मुसलमानी वा खतना गर्दा अस्पतालमा नै चिकित्सकको हातबाट शल्यक्रिया गराएर गर्नुपर्छ,’ उनले भने । मौलाना इजरायल अहमद रिजवी पनि फलानो व्यक्ति वा हजामले नै गर्नुपर्छ भन्ने कुरा कतै नलेखिएको बताउँछन् । सुरक्षित तरिकाले अस्पतालमा हुन्छ भने त्यसको लागि अस्पतालमै लैजान मुस्लिम समुदायलाई अनुरोध समेत गर्छन् ।
कतिपय बालक जन्मिएको छैठौ अर्थात् छठीहार हुने दिनमै खतना गराउँछन् भने कतिपयले ५ बर्षको उमेरसम्म पनि गराउने गर्छन् । बाल्यकालको अवस्थामा खतना गर्दा घाउ छिट्टै निको हुने र पीडा हुँदा बालकलाई आमाले दूध खुवाएर भुल्न मद्दत हुने हुनाले ६ महिनाभित्र अधिकांशको खतना हुने गरेको हुसैनले बताए ।
खतना किन गरिन्छ ?
इस्लाम धर्मका अतिरिक्त अन्य केही धर्ममा समेत खतना गर्ने परम्परा रहेपनि मुस्लिम समुदायमा भने जन्मिने बालकलाई अनिवार्य रुपमा खतना गर्नैपर्छ । राष्ट्रिय मुस्लिम संघर्ष गठबन्धनका प्रवक्ता मोहम्मद साजिद हुसैनका अनुसार मानिसलाई ‘पाक साफ’ (पवित्र) गर्नका लागि खतना आवश्यक हुन्छ ।
‘इस्लाम धर्ममा पिसाबलाई नापाक अर्थात् अपवित्र मानिएको छ,’ हुसैनले थपे, ‘लिङ्गको टुप्पोतिरको बाहिरी गोलो छाला काटेपछि मुस्लिम समुदायले पिसाब गर्दा लिङ्गमा अड्किएर बस्दैन ।’ अन्यथा पिसाब लिङ्गमा रहिरहने हुनाले लिङ्ग अपवित्र हुने गर्छ ।
‘मुसलमानी नगराए मुसलमान नहुने होइन,’ उनी भन्छन, ‘तर मुसलमानमा कुनै पनि यस्तो पुरुष छैनन, जसले मुसलमानी नगराएको होस् ।’
मौलाना इजरायल अहमद रिजबी पनि मुसलमानी अनिवार्य रहेको बताउँछन् । यद्यपि खतनाको विषयमा इस्लाम धर्मको मुख्य धार्मिक ग्रन्थ कुरानमा उल्लेख रहेको पाइदैन ।
खतना गर्ने आधुनिक विधि
खतनालाई लिएर विश्वभरी बिरोधमा आवाजहरु समेत सुनिन थालेका छन् । यो अत्यन्त पीडादायी प्रकृया भएकोले मानवअधिकारवादी संघ संस्थाहरुले समेत खतना परम्पराको बिरुद्ध आवाज उठाउँदै आईरहेका छन् । तर कतिपय विकसित देशहरुमा खतनालाई सरल र पीडामुक्त बनाउनका लागि आधुनिक विधिहरुको प्रयोग गर्न शुरु गरिएको छ ।
यसका लागि एम्ला नामक क्रिम लिंगको टुप्पोमा खतना गर्नुभन्दा दुई मिनेट अगाडी लगाइने गरिन्छ यसका अतिरिक्त पीडामुक्त प्रकृया बनाउनका लागि इन्जेक्सनको प्रयोग समेत गर्ने गरिएको पाइन्छ । नवजात शिशुको खतनाका लागि गाम्को कीलक, प्लास्टिबेल र मागेन कीलक जस्ता उपकरणहरुको प्रयोग गर्ने गरिएको छ ।
विश्व स्वास्थ्य संगठनको अनुसार विश्वभरी पुरुषहरुको कुल जनसंख्याको ३० प्रतिशत पुरुषको खतना गरिएको छ । जसमध्ये ७० प्रतिशत पुरुष मुस्लिम समुदायकै छन् । महिलाहरुको खतना समेत विश्वको कतिपय स्थानमा हुन्छन् तर त्यसको तथ्यांक भने कहीँ कतै छैन । दक्षिण पूर्व एशिया, अफ्रीका, संयुक्त राज्य अमेरिका, फिलीपीन्स, इजरायल र दक्षिण कोरियामा सबैभन्दा बढी खतनाको परम्परा रहेको पाइन्छ ।
उपत्यकामा बल्नै छाडे ट्राफिक बत्ती
काठमाडौं । सरकारको बेवास्ताका कारण काठमाडौं उपत्यकाका ट्राफिक बत्ती वर्षौंदेखि नबली बेवारिसे अवस्थामा छन् । ट्राफिक बत्तीको मर्मत सम्भार…
एक सय ५० भन्दा बढी ठेकेदारको बैंक खाता रोक्का, प्रचण्डका घरधनीलाई जोगाइयो
काठमाडौं । समयमा निर्माण कार्य सम्पन्न नगरेको र निर्माण कार्य गुणस्तरीय नगरेको भन्दै सरकारले निर्माण व्यवसायीहरुको बैंक खता रोक्का…
चन्द्रमाको कक्षमा पुग्यो चन्द्रयान २
भारतले चन्द्रमामा प्रक्षेपण गरेको चन्द्रयान २ नामक अन्तरीक्षयान चन्द्रमाको कक्षमा प्रवेश गरेको छ ।
भारतीय अन्तरीक्ष एजेन्सी इसरोका अनुसार पृथ्वीको…
बागमती किनारका सुकुम्बासी बस्तीसँगै फेरि पनि डुब्यो भक्तपुर
काठमाडौं । अबिरल वर्षाका कारण काठमाडौं, ललितपुर र भक्तपुरका केही क्षेत्र डुबानमा परेका छन् । शान्तिनगर, बानेश्वर, बल्खु, टेकुका…
तिमी अर्थात् मेरो बाबु !
मेरी आमा अर्थात्
रजस्वाला रोकिएदेखि नै
तिम्रा आँखामा नाँच्न थालेका हुन्
पिउन सुरु गरेका हौ
बाबु भएको सपना देखेरै
सर्टिफिकेट धितोमा राखेर ७ लाखसम्म ऋण
काठमाडौं । शैक्षिक बेरोजगारहरुका लागि सरकारले चालु आर्थिक वर्षबाटै शैक्षिक योग्यताको प्रमाणपत्र (एकेडेमिक सर्टिफिकेट) धितो राखेर सहुलियत व्याजदरमा ऋण…